Page 8 – MySansar
‘कागले कान लग्यो’ भन्दा भूषण दाहालसहितका मान्छे कागका पछिपछि दौडेका?
Posted on September 16, 2021 September 16, 2021 by Salokya
आज एउटा रमाइलो दृश्य देखियो सामाजिक सञ्जालमा- कान्तिपुर टेलिभिजनमा वर्षौँ नेतृत्व तहमा रहेका भूषण दाहाल जस्ता सञ्चारकर्मी एउटा फेक स्क्रिनसटलाई विश्वास गरेर कान्तिपुरका प्रधान सम्पादकलाई मेन्सँदै गरेको। कत्रा ठूलाठूला नेताहरुको अन्तर्वार्ता लिइसकेका व्यक्ति त त्यसरी ‘कागले कान लग्यो’ भन्दा कान नछामी कागका पछि पछि दौड्दै गरेको देखियो भने अरु सामान्य मान्छेको के होला हालत ?… Continue reading
अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासा (National Aeronautics and Space Administration) लाई नेपालीहरुले खुबै मान्छन् कि के हो। जेमा पनि नासा कै नाम झुण्डिरहेको हुन्छ। केही अघि मात्र स्वघोषित मेमोरी किङ विजय शाहीले आफू नासामा गएको कुरा बताएका थिए। मेमोरी र नासाको के सम्बन्ध छ, यो थाहा पाएर थाहा पाइनसक्नुको कुरो हो। तर नासाको कुरा ल्याएर मज्जैले… Continue reading
-मधु लम्साल- अहम्, दम्भ, अहङ्कार, बेलगाम बोली र हेपाहा प्रवृत्तिले ओली अस्ताए। यसैमा देउवालाई चिट्टा पर्‍यो। अनायासै प्राप्त विरासत कसरी सम्हाल्ने देउवाले बुझ्न जरुरी छ। खुस्केका ओली अहिले धेरै नबरबराए मात्र हुन्छ, देउवाले भने धेरै गर्नुपर्छ। देउवा फुकी फुकी पाइला चाल्नुपर्ने अवस्थामा छन्। पाँचौँ पटक देशको बागडोर समातेका देउवा ‘सुधारिएको’ देख्ने अपेक्षा हो फरक दृश्य… Continue reading
३ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्मला पन्तका हत्याराले सजाय पाउन सकेको छैन। यो केसमा के नेता, के राजनीतिक दल, के मिडिया, के पत्रकार- सबले आफ्नो स्वार्थको रोटीमात्र सेके। दोषीले सजाय नपाउने गरी हल्लाको पछि लागेर वातावरण बिगार्नमा क-कसको हात रह्यो भन्ने बारे #WhoKilledNirmala शृङ्खलाका ३० भागमा धेरै कुरा खुलाइसकेको छु। छुटाउनु भएको भए यहाँ क्लिक गरी… Continue reading
सेतोपाटीको आर्टिकलमा कानुनी प्रावधानसम्बन्धी गलत तथ्य
Posted on September 5, 2021 September 3, 2021 by Salokya
– अतित अधिकारी – सेतोपाटीमा भदौ १३ गते अमित ढकालको एउटा आर्टिकल छापिएको छ- आरक्षणमा आक्रोश शीर्षकमा। यो आर्टिकलमा एउटा तथ्यगत गल्ती छ। आर्टिकलमा एमबिबिएस पढ्न छात्रवृत्तिका लागि कसैले निवेदन दिएको छ भने उसले तीनवटा शर्त पूरा गर्नुपर्छ भन्दै तीन वटा शर्त यसरी लेखिएको छ – पहिलो, ऊ आरक्षण पाउन योग्य समूहबाट हुनुपर्छ। दोस्रो, ऊ… Continue reading
अनलाइन पेमेन्ट रोज्दा झन् बढी पो झण्झट
Posted on September 4, 2021 September 3, 2021 by Salokya
आफू अनलाइनमा धेरै बस्ने र काम पनि अनलाइनको धेरै गर्ने हुनाले अनलाइनलाई प्राथमिकता दिउँ भन्ने सोच हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ अनलाइन रोज्दा झन् झण्झट आइलाग्ने हुन्छ। आज मलाई त्यस्तै भएको एउटा अनुभव सुनाउँछु। पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। एक चोटी कोरोना लागेर दुई डोज खोप लगाइसक्दा पनि नाकमा सुइरो घोच्नुपर्ने बाध्यता अझै आइलाग्छ क्यार्नु। सरकारले… Continue reading
माधव नेपाललाई समाचारमा जबर्जस्ती रुवाउन खोजेको पोल खुल्दा परेको असर
माधव नेपालको दुई वर्ष पुरानो आँसु बेचेर उल्लु बनाउन खोज्ने मिडियाबारे लेखेको ब्लगले पार्नु पर्ने ठाउँमा ठूलै असर पारे जस्तो छ। ब्लग पढ्न छुटाउनु भएको भए यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्। त्यसको फलोअप ब्लग पनि थियो- माधव नेपाल रोएको खबरमा मिडियाले गरेको नयाँ ‘ट्विस्ट’ दुई वर्षअगाडि अर्कै कार्यक्रममा माधव नेपाल रोएको भिडियोको स्क्रिनसट राखेर एमालेका दोस्रो… Continue reading
केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा दुई वटा आँसु कथा भाइरल छन्। एउटा आँसु हो- कमेडी च्याम्पियनका बिक्की अग्रवालको। कमेडी सोमा समेत आँसु आवश्यक भएको बेला समाचारमा आँसु किन नचाहिने त? त्यसैले माधव नेपाल रोएको विवरणसहित फोटो भाइरल भएको थियो। यो फोटोको बारेमा नेपालफ्याक्टचेकमा हिजो एउटा फ्याक्ट चेक आएको छ- के हो माधवकुमार नेपाल रुँदै गरेको भाइरल… Continue reading
माधव नेपालको दुई वर्ष पुरानो आँसु बेचेर उल्लु बनाउन खोज्ने मिडिया
Posted on August 31, 2021 by Salokya
के तपाईँले दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले धोका दिएको भन्दै एमाले फुटाएकोमा पछुतो मानेर नेता माधवकुमार नेपाल रोएको फोटो कुनै मिडियामा वा सामाजिक सञ्जालमा देख्नुभएको छ? त्यो सही होइन है। माधव नेपाल रोएका पक्कै हुन्, तर त्यो दुई वर्षअगाडिको भिडियोको कुरा हो। दुई वर्ष पुरानो आँसु बेचेर मिडियाले उल्लु बनाउन खोजेको मात्रै हो। यो बारेमा नेपालफ्याक्टचेकमा प्रकाशित… Continue reading
नेपाली मिडियाले गर्‍यो मलाला युसुफजाईको ‘हत्या’
Posted on August 27, 2021 August 27, 2021 by Salokya
मलाला युसुफजाई चिन्नुहुन्छ होइन? नोबल पुरस्कार जित्ने हालसम्मकै सबैभन्दा कम उमेरकी विजेता। पाकिस्तानमा जन्मिएर विश्वभर नाम कमाएकी मलाला अहिले २४ वर्षकी भइन् र महिला र बालिका शिक्षाकी अभियन्ता छिन्। के तपाईँ पत्याउनु हुन्छ- उनको मृत्यु भइसक्यो? नपत्याएर के गर्नु। नेपाली मिडियाले उनको मृत्यु भएको घोषणा गरिसकैको देखियो।
‘कान्तिपुर’को भिडियोमा राँगो : खास कुरा चैँ काँ गो ?
Posted on August 21, 2021 August 21, 2021 by Salokya
फेसबुक स्क्रोल गर्दै थिएँ। कान्तिपुरको अनलाइन इकान्तिपुरको आधिकारिक फेसबुक पेजको एउटा पोस्ट देखियो। ‘जब राँगोलाई नियन्त्रण लिन एसएलआर चलाउनुपर्‍यो’ लेखिएको रहेछ। के रहेछ भन्ने जिज्ञासा जाग्यो। क्लिक गरी भिडियो हेरेँ। राँगोको पोस्ट हेरेपछि लाग्यो- खास कुरा चैँ काँ गो- काँ गो !
केही समयअघि हामीले मिडियाहरुमा विदेश जानका लागि भ्याक्सिन सर्टिफिकेट चाहिने भएकोले त्यसका लागि लाम लाग्नेहरुको थेगी नसक्नुको भिडका फोटोहरु देखेका थियौँ। अहिले अनलाइनबाटै क्युआर कोडसहितको भ्याक्सिन सर्टिफिकेट दिन थालिएको छ। म आफैले पनि फर्म भरेर सर्टिफिकेट लिइसकेँ। कसरी सर्टिफिकेट लिन सकिन्छ भन्ने बारे छोटो जानकारी राख्न चाहेँ।
#ChhoriMaiyaKhai भिडियो ब्रिफिङ : छोरीमैयाँ हराएको दिन के भएको थियो, निकीले किन ढाँटिन्
१० वर्षदेखि हराइरहेकी काठमाडौँकी ५१ वर्षीया महिला छोरीमैयाँ महर्जनको रहस्यमय घटनाबारे सिरिज उकेरामा जारी छ। यहाँ मैले त्यो घटनाबारे भिडियो ब्रिफिङ बनाएको छु। हेर्नुस् यो सिरिजको दोस्रो भाग।